Sidee Loogu Soo Celiyaa Fariimaha WhatsApp? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee looga soo kabanayaa fariimaha WhatsApp?
Waxaa laga yaabaa 1, 2021 0 comments 391
Barnaamijka Fariinta WhatsAppXiddiga noocan ah ee barnaamijku wuxuu leeyahay koronto kala duwan oo u oggolaanaysa adeegsadayaasheeda inay ku xafidaan macluumaadka siyaabo kala duwan. Haddii ay dhacdo luminta farriimaha muhiimka ah ee ku jira sheekada, waxaa jira siyaabo lagu soo kabasho macluumaad.
Dareenkan, codsigu wuxuu u sahlayaa adeegsadayaasheeda suurtagalnimada soo kabasho farriimahan adoo fulinaya talaabooyin fudud, kahor intaadan tirtirin aplicación. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa in la tirtiro nooca dalabka ee ku jira taleefanka kaas oo la doonayo soo hel fariimaha.
Talaabooyinka la raacayo si looga soo kabsado fariimaha WhatsApp.
Marka dalabka la joojiyo, ee loogu talagalay Soo kabashada farriimaha WhatsApp ka dib sii wad inaad mar kale rakibtid. Ka soo degsashada nooca ugu dambeeya barnaamijka 'Store Store' marka laga hadlayo Android ama Apple App Store marka laga hadlayo Iphone.
Marka nooca cusub la rakibo, waa la furay codsiguna wuxuu weydiin doonaa isticmaaleha haddii ay doonayaan dib u soo ceshano taas oo lagu kaydiyay gudaha ama Google Drive. Waxay ku jirtaa talaabadan meesha isticmaaleha waa inuu doortaa inuu soo celiyo keydkan si soo kabso taariikhda fariintaada WhatsApp.
Dhinacyada qaar in laga fiirsado soo kabashada farriimaha WhatsApp.
Waa in lagu xisaabtamo inay jiraan shuruudo cayiman oo loogu talagalay soo helida farriinta waa lagu guuleystey, waxa ugu horeeya ee la sameeyo waa in la habeeyo isla taleefan lambar oo aad laheyd kahor intaadan arkin barnaamijka.
Muuqaal kale oo ah in laga fiirsado ayaa ah marka aad mar kale rakibto arjiga si aad u soo ceshato farriimaha, waa inaad isticmaashaa isla koontadii Google ee aad horay u lahayd si aad sidan ugu bixiso Soo kabashada farriimaha WhatsApp adoo adeegsanaya kaydinta ku keydsan Google Drive.
Maxaa dhacaya haddii isticmaalaha uusan horay u qaabeyn ikhtiyaarka keydinta xilliyeed ee sheekooyinka ku jira Google Drive?
Xaaladdan oo kale, isticmaaluhu ma awoodi doono inuu fuliyo wax ku oolnimada Soo kabashada farriimaha WhatsApp, waxaa jiri doona oo kaliya ikhtiyaarka ah soo kabashada kuwa fariimaha kuwa ku kaydsan gudaha telefoonka. Nuqulkani wuxuu kaydiyaa oo keliya 7 maalmood ee la soo dhaafay ee isticmaalka arjiga.
Tani nuqul deegaanka ah waxaa lagu kaydiyaa sidii fayl taleefanka ah waxaana lagu heli karaa adigoo fiirinaya feylasha. Si tan loo sameeyo, waa inaad isticmaashaa nooca maamulaha faylka ee aad heli karto iyadoo loo eegayo nooca Android ama iOS ee lagu rakibay taleefanka. Badanaa waxay ku yaalliin / sdcard / WhatsApp / tusaha ama galka weyn ee keydka gudaha.
Soo kabashada farriimaha ugu da'da weyn WhatsApp.
Waxa kale oo jira hab lagu fuliyo Soo kabashada farriimaha WhatsApp Ka duug ah labadaba taleefannada leh nidaamka hawlgalka Android, iyo kuwa leh iOS. Tani waxay u baahan tahay in lagu rakibo barnaamij kuu oggolaanaya inaad maamusho faylasha. Haddii aan la heli karin, waxaad kala soo bixi kartaa Play Store ama Apple App Store sida xaalku noqon karo.
Markaad hesho arjiga, waa inuu ku yaal diiwaanka sdcard / WhatsApp / Databases. Markaas magaca beddelka ah dib loo soo celiyo laga bilaabo msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 illaa msgstore.db.crypt12. Waa inaadan badalin lambarka borotokoolka.
Marka talaabooyinkan la qaado, arjiga waa in la joojiyaa WhatsApp oo dib ugala soo degsato Play Store ama Apple App Store sida xaalku noqon karo oo raac talaabooyinka ku tilmaaman rakibida, waqtiga la helayo tilmaamaha waa inaad aqbashaa ikhtiyaarka HELI.
1 Talaabooyinka la raacayo si looga soo kabsado fariimaha WhatsApp.
2 Dhinacyada qaar in laga fiirsado soo kabashada farriimaha WhatsApp.
3 Soo kabashada farriimaha ugu da'da weyn WhatsApp.
Sidee loo soo ceshaa fariimaha la tirtiray ee WhatsApp?
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha WhatsApp aan gurmad